Lumen5: Ku Soo Celiso Mawduucyada Fiidiyowyada Bulshada Isticmaalka AI | Martech Zone
Inta badan maahan in aan aad ugu faraxsanahay barxad aan isla markaaba iska diiwaan galiyo koonto la bixiyay, laakiin Lumen5 ayaa laga yaabaa inay tahay codsi fiidiyoow bulsheed oo qumman. Waa adeegsadeheeda adeegsigu waa wax layaableh, kala-soociddiisu xadidan tahay ayaa wax fudud ka dhigaysa, qiimayntuna ku habboon tahay bartilmaameedka. Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud:
Lumen5 Social Video Platform Features Astaamaha waxaa ka mid ah:
Qoraal ugu dir Video - Si fudud ugu beddel maqaallada iyo qoraalada maqaallada fiidiyowga. Waxaad ku sameyn kartaa tan adoo galaya RSS Feed, galaya xiriirinta maqaalkaaga, ama nuqul ka sameynta iyo dhajinta waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Aaladda Shaqada otomaatiga ah - Lumen5 wuxuu ku darayaa isticmaalka sirdoonka macmalka ah iyo barashada mashiinka si aad u dhisto muuqaaladaada, aad horay ugu dhigto qoraalkaaga, una muujiso ereyada muhiimka ah. Dabcan, dhammaantood waa wax laga beddeli karaa iyaga oo isticmaalaya dhismahooda - laakiin waxay ku siinaysaa madax weyn!
Maktabadda Warbaahinta - Maktabad la raadin karo oo ay la socdaan malaayiin faylal warbaahin oo bilaash ah, oo ay ku jiraan fiidiyoow, wali sawirro, iyo muusig.
Ikhtiyaariyada Calaamadaha - Habee fiidiyowyadaada si aad ugu ekaato muuqaalka iyo dareenka astaantaada. Waxaad ka dooran kartaa qaar ka mid ah noocyada qoraalka ama waxaad soo dejin kartaa taada. Intaa waxaa sii dheer, waad soo rogi kartaa astaantaada iyo astaantaada!
Foomamka Fiidiyowyada - Waxay kuxirantahay qorshaha aad iskuqorto, waxaad kuqabankartaa fiidiyowyo 480p, 720p, ama 1080p sidookale sameesid qeybta 16: 9 qaabka muuqaalka ama 1: 1 qaab laba jibaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada sida Instagram.
Isdhexgalka Facebook - Toos ugu soo dir fiidiyowgaaga Facebook koontadaada gaarka ah ama boggaaga Facebook.
Daqiiqado gudahood, waxaan awooday inaan dhiso oo aan u habeeyo fiidiyowgan maqaalkii ugu dambeeyay ee aan ku qoray tilmaamaha maaraynta waqtiga ee suuqleyda.
Iyo, ilbidhiqsiyo gudahood waxaan awooday inaan nuqul ka sameeyo fiidiyowga oo aan u cabiro 'Instagram'.
Dhis Video-gaagii Ugu Horeeyay ee Warbaahinta Bulshada
Tags: muuqaalka facebookfiidiyowga instagramdumo 5samee videofiidiyowga bulshadasameeyaha fiidiyowga
Meel udhaxeysa SPAM iyo Khiyaanada Been Abuurka